Pep Guardiola Oo Ka Badbaaday Ganaax Lagu Saaro Gardarradii Uu La Doontay Redmond | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Pep Guardiola Oo Ka Badbaaday Ganaax Lagu Saaro Gardarradii Uu La Doontay Redmond
(05-12-2017) Tababaraha Manchester City, Pep Guardiola ayaa ka badbaaday ciqaab lagu saaro falkii daandaansiga ahaa ee uu kula kacay weeraryahanka Nathan Redmond markii ay dhamaatay ciyaartii City ay daqiiqaddii ugu dambaysay u damaashaadday guusha ee ay Southampton isku haleeleen Etihad Stadium 29-kii November.
Xidhiidhka FA ayaa ka dalbaday tababaraha reer Spain inuu faahfaahin ka bixiyo falkii uu kula kacay ciyaartoyga 23 jirka ah, waxaana markii dambe ay sheegeen inay ogolaadeen sharraxaaddiisii oo aanay jirin turxaan uu huwanaa damaashaadkiisu.
Tababare Pep Guardiola ayaa u muuqday inuu ku qayliyey Redmond markii uu garoonka kasiibaxayay, laakiin Redmond ayaa afka u kala qaaday inuu u jawaabo.
Redmond oo warbaahinta la hadlay ayaa difaacay Pep Guardiola, waxaanu ka sheekeeyey hadalladii uu ku yidhi, waxaanu yidhi: “Wuxuu faalleeyey tayadayda anigoo ah ciyaartoy da’yar oo Ingiriis ah, iyo siduu u doonayey inaan weeraro kooxdiisa intii ay ciyaartu socotay sidii sannadkii hore oo kale”
Redmond oo hadalkiisa sii wata, waxa uu yidhi: “Waxaan u sheegay inaan qabtay wixii uu tababaraygu i faray.”
Jimcihii ayaa uu tababare Pep Guardiola sheegay in mararka qaarkood aanu naftiisa maamuli karin oo ay ka tan badanayso xamaasaddu.